Home Wararka Yaa ka danbeeyay dilkii Nabadoon Maxamed Xassan?
Yaa ka danbeeyay dilkii Nabadoon Maxamed Xassan?
Kooxo hubeysan ayaa Xaafad ku taalla Suuqa Juungal ee degmada Yaaqshiid waxaa ay ku dileen Nabadoon Maxamed Xassan Nuur Muuse oo kamid ahaa Odayaasha Dhaqanka Muqdisho. Ragga hubeysnaa ayaa Nabadoonka ku dhex dilay Gurigiisa, xilli uu akhrisanayay Kitaab Qur’aanka Kariimka, sida ay Risaala u sheegeen qaar kamid ah Ehelladiisa.
Gooboogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in ragga dilka geystay oo laba Ruux ahaa ay dilka kadib goobta ka baxsadeen, isla markaana meydka Nabaddoonka la geeyay Xarunta Hay’adda Dambi baarista ee CID-da.
Wararka ay heshay MOL ayaa sheegaya in dilka Nabadoonka uu la xiriiro arimah doorashooyinka. Waxaa horay loo dilay qaar badan oo kamida nabadoonada qaybta ka ah doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo bilaha soo socda.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho kusoo batay dilalka qorsheysan oo ay geeysanayaan Al-Shabaab, kuwaas oo aad u yaraa Saddexdii Sano ee la soo dhaafay.